musha nyika dzakabatana Singers Travis Scott Zvechidiki Nhau Uye Untold Biography Chokwadi
Kutanga, zita rake remadunhurirwa ndere “La Flame“. Chinyorwa chedu chinokupa Kuona Kwakazara kweTravis Scott Yehucheche Nyaya, Hupenyu, Mhuri Chokwadi, Vabereki, Hupenyu hwepakutanga uye zvimwe zviitiko zvinozivikanwa kubva paudiki hwake nguva kusvika panguva yekunyora.
Hupenyu nekusimuka kwaTravis Scott.
Ehe, munhu wese anoziva nezve mafirita aHip hop, Lo-fi uye mimhanzi yepakati kuti abudise yake yakasarudzika mimhanzi maitiro. Zvisinei, vashoma chete ruoko rwevateveri vanofunga yedu vhezheni yeTravis Scott's biography iyo inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwezve ado, ngatitangei.
Travis Scott Zvekurera Nyaya Yenyaya:
Kutanga kuenda, Travis Scott aive nemazita Jacques Berman Webster II pakuzvarwa kwake. Akazvarwa pazuva rechimakumi matatu ra Kubvumbi 30 kuvabereki vake, amai vake- Wanda Yvette (Mafashama) nababa- Jacques Bishop Webster muHouston, Texas. Travis ndiye wekutanga wevana vatatu akazvarwa mumubatanidzwa pakati pevabereki vake.
Travis Scott Mhuri Yemhuri: Tichitarisa mumhuri yaTravis Scott, mumwe aigona kufungidzira zvakajeka kuti muimbi weAmerica ane dzinza reAfrica -America nekuda kweganda rake rakasviba. Anorumbidza kubva kumhuri yepakati-yemhuri uye akarererwa munzvimbo dzinoverengeka. Muimbi wekuAmerican prodigy aigara nambuya vake mukati memakore matanhatu ekutanga ehupenyu hwake muSouth Park, Houston uye akazotamira kuMissouri City kwaaigara nevabereki vake.
Mugadziri wemimhanzi weAmerica akarererwa muhodhi kuSouth Park, Houston.
Kukura naambuya vake, Travis akaona zvinhu zvakawanda zvekupenga munharaunda yake. Aifanirwa kutsungirira mararamiro eiyo Ghetto / Hood nharaunda. Nzvimbo yeSouth Park Houston kare ikako inozivikanwa nemhosva dzayo dzakaipisisa. Ambuya vake vakafunga kuti nharaunda yaive nengozi zvakanyanya mukurerwa kwake uye ndokuzivisa vabereki vaTravis Scott kuti vauye kuzomutora. Travis Scott akambotaura achikura muGhetto;
“Ndichikura, ambuya vangu vakaramba vakagara mumusoro saka ini ndaona zvisina musoro kupenga. Ndakaona kutsamwa kwakapenga uye kupenga kwakaburitsa maifu * k * rs, ndakaona vanhu vachitaridzika kusanzwisisika, vane nzara uye vakagwinya. Ini ndaigara ndichiita senge, ndinofanirwa kuburitsa fu * k iyi sh * t. Iyo hood yakandipa kumucheto uye yakandiita zvandiri nhasi ”.
Travis Scott Zvechikoro Chemwana- Dzidzo yake:
Paakasvika kuMissouri City, vabereki vaTravis Scott vakamunyoresa kuElkins High School uko kwaakapedza kudzidza kwake Chikoro chepamusoro aine makore gumi nemanomwe. Akakurumidza kugamuchira kupinda muYunivhesiti yeTexas-San Antonio. Waizviziva here?… Travis akazobuda muUniversity mumakore ake ekupedzisira kuti anyatsoteerera mumhanzi.
Muimbi wechiAmerican muimbi akafananidzirwa mubhuku regore reElkins High kwaakapedza aine makore gumi nemanomwe.
Kutanga Kunorwadza: Kurega chikoro hakuna kuenda zvakanaka nenhengo dzemhuri dzaTravis Scott. Kuna varombo Travis, kwaive kuzvipira kunorwadza uko kunoratidzika kunge ndiyo nzira yake yekuita. Pakutanga, vabereki vake vaTravis Scott vaisatenda nzeve dzavo kana ruzivo rwekusiiwa kwemwana wavo rwasvika kwavari. Akatsamwiswa nesarudzo yake yekusiya chikoro chemimhanzi, vabereki vake vakagura rutsigiro rwemari rwavaipa mwanakomana wavo.
Travis Scott Zvechikoro Chemwana- Hupenyu Hwake hwepakutanga Hupenyu:
Akarwadziwa uye akaodzwa moyo, aisekwa nekusekwa, asi akaverenga zvese izvi zviitiko sekurudziro dzekutanga dzaaida kuti abudirire kubudirira kwaaifungira mumimhanzi. Ichi chikamu chakakosha cheTravis Scott's Biography yaasingazombokanganwa. Achienderera mberi, akakurumidza kubatana neshamwari yake Chris Holloway ndokuumba boka rakanzi Vakapedza kudzidza. Pamwe chete, ivo vakaburitsa isina zita rekutanga EP paMyspace.
VERENGA Snoop Imbwa Yevacheche Nyaya Yenyaya Uye Untold Biography Chokwadi
Akagadzira Iye Akapedza kudzidza uye akatanga kwake kwekutanga basa kubudirira naChris Holloway.
Rimwe gore mushure mekuburitswa kwe EP yavo, Travis Scott akaumba boka idzva - Ivo vaaidzidza navo - newaaimbodzidza naye, OG Chess. Vakadzidza navo vakashanda nesimba uye muna 2009, vakaburitsa yavo yekutanga chirongwa, Buddy Rich. Vakaenderera mberi nekuburitsa Cruis'n USA muna2010 zvese nekuda kwehunyanzvi hwekugadzira hwaTravis Scott.
Nzira yeku Fame Nhau:
Muna 2012, Ivo vaClassband vakadzingwa nekuda kwekupokana kwemari uye vega. Kutevera kubviswa kweClassmate, Travis Scott akasara ari munjodzi yekuparara kwemari uye yemanzwiro. Kuora mwoyo kwake kwainge kuri kukura uye matambudziko ake anoita kunge ari kuwedzera zvakanyanya. Kuedza kupona, akatamira kuNew York City ndokugara neshamwari yake Mike Waxx muridzi weI Illroots (webhusaiti yemimhanzi).
Kupesana nehupenyu hwoumbozha hwevanhu vari mukati mezera rake-boka, Travis Scott akasara asina sarudzo kunze kwekurara pasi iye achigara kumba kweshamwari yake. Akatsungirira hupenyu hwekusagadzikana kuti akwanise kushandisa nguva kuJust Blaze's studio.
Mwedzi mishoma yekushaikwa kwekubudirira muNew York City akaona Travis Scott achienda kuLos Angeles kwaakange achakasiiwa neshamwari yake iyo yakanga yamuvimbisa pekugara. Avhiringidzika nedambudziko rose, akadzokera kumba kwake kumhuri kuHouston. Zvakare zvakare, vabereki vaTravis Scott vakamudzinga, chiito chakamumanikidza kuti adzokere kuLos Angeles.
Rise kune Mukurumbira Nyaya:
Kubudirira kwaTravis Scott hakuna kupihwa kwaari mundiro yegoridhe. Mubhedha weshamwari yake paUniversity yeSouth California wakava nzvimbo yake yemubhedha pamwe chete nepekugara raaigona kuwana. Akakurumidza kuuya mukuonekera kwemumhanzi wehunyanzvi kuburikidza neTI yeGreat Hustle uyo akanzwa kugadzirwa kwake - Mwenje Rwerwara - ndokusaina chibvumirano naye. Scott akatanga kushanda pane yake yekutanga yakazara-urefu nyanzvi chirongwa (yakasanganiswa tepi yakanzi Owl Farao) iyo yakanonoka uye yakazogadziriswazve na Kanye West naMike Dean.
Travis Scott yekutanga yakazara-kureba nyanzvi chirongwa - Owl Farao - chifukidziro.
Nekukurumidza kumberi kunguva yekunyora Travis Scott's Biography, mimhanzi superstar yaita zvakawanda mukukanganisa muAmerican indasitiri yevaraidzo. Akasarudzwa pamatanhatu eGrammy Awards kubva paakakwira mukurumbira. Akakundawo Billboard Music Award uye akatengesa anopfuura mamirioni makumi mana nemashanu marekodhi akasimbiswa muUS chete.
Kuita kwakashamisa kwaScott kwakamupa kusarudzwa mu2019 Grammy Awards kudomwa.
Travis Scott's track, Astroworld akasarudzwa Album yegore mune iyo 2019 BET Hip Hop Awards pazuva re5 Gumiguru 2019. Vamwe vose, sezvavanotaura, ikozvino nhoroondo.
Travis Scott Musikana:
Hupenyu hwehukama hwemushamarari wemumhanzi weAmerica akasarudzika zvinonakidza. Panguva yekunyora, Scott anga achibatanidzwa muhukama nemunhu mumwe chete kubva paakakwira mukurumbira. Sezvo zvisingaite sezvingaite sehupenyu hwemuvhuru Artiste, Travis Scott akatanga kufambidzana neyechokwadi TV nyeredzi, Kylie Jenner muna April 2017.
Travis Scott Vana:
Ukama hwake naKylie hwakapa kuberekwa kwemwana wavo wedangwe, Dutu Webster pazuva 1 raFebruary 2018. Idzo shiri mbiri dzerudo dzakanyudzwa mumvura yekufadzwa yekubereka mwana uye inoisa simba rakawanda mukurera mwana wavo mumwechete.
Muna 2019, Travis Scott naKylie Jenner vakazivisa kuti havachafambidzana zvakare. Nhau dzekuputsa kwavo dzakava runyararo rwekushungurudzika muhupenyu hwevateveri vavo vaisakwanisa kutenda chokwadi chenhau.
Travis Scott Mhuri:
Kuenderera mberi kuhupenyu hwemhuri yaTravis Scott, nyeredzi yemimhanzi inorumbidza kubva kumhuri yepakati-yemhuri kumashure. Scott akadonha kubva mukufarirwa nevabereki vake pavakaona kuti akange abuda mukoreji achitsvaga basa remumhanzi. Muchikamu chino, tinokupa zvakawanda nezve nhengo dzemhuri yaTravis Scott kutanga nevabereki vake.
Nezve baba vaTravis Scott: Jacques Bermon Webster ndibaba vaTravis Scott nepo Wanda Webster ari amai vaTravis Scott. Jacques aive muzvinabhizimusi pamwe nemuridzi wengoma uyo aive neruzivo rwakanyanya muunyanzvi hwemimhanzi. Akasiya bhizinesi rake kuti aite basa remumhanzi iro risingazobudirire.
Kutarisa mumararamiro emuimbi emhuri nevabereki vake pazera diki.
Nezve Amai vaTravis Scott: Amai vaScott vakashanda nechitoro cheAT & T vachitengesa mafoni kuitira kuti vasangane nemari yemhuri yavo. Aigara achitaura kuna amai vake sekurudziro huru yekuti sei akashanda nesimba kuti abudirire mumimhanzi.
Nezve hama dzaTravis Scott: Travis Scott ane munun'una uye hanzvadzi diki ivo vari mapatya chaiwo ekuti; Joshua naJoridhani. Hapana ruzivo rwakawanda rinozivikanwa nezve babamudiki vake. Haana kuona kukosha kwekuburitsa zvimwe zvakawanda nezvehukama hwake nehama dzake pamwe nehanzvadzi dzake.
Nezve hama dzaTravis Scott: Achienderera mberi kumhuri yemhuri yaTravis Scott, ambuya vake amai vainzi Sealie Roberta Terrell apo sekuru vake amai vainzi Lawalia Mafashama, Jr. Vanasekuru vake baba Waymon Travis Webster naRever Berneise (akazova Bernice) Sargent. Hapana ruzivo rwakawanda rwunozivikanwa nezve babamunini navanatete vaTravis Scott pamwe nababamunini vake.
Travis Scott Hupenyu hwepamoyo:
Chii chinoita kuti Travis Scott afare? Gara kumashure apo isu tichikuunzira zvigadzirwa zvehunhu hwaTravis Scott izvo zvaizokubatsira iwe kuti uve nemufananidzo wakazara wake. Kutanga, Travis Scott's persona isanganiswa yeTaurus zodiac maitiro. Akanyatsoratidza hunhu hwehunhu hwake hweZodiac.
Kukura muHood kwakaita kuti Travis Scott ave neruzivo kwazvo mukugadzirisa nyaya dzakaoma. Zvido zvake zvikuru nekuseredza kunge jaya raive rekuita mabiko uye nhabvu. Aipinda neshamwari dzake uye kunwa navo pamirazvo shure kwaizvozvo voenda kumitambo yenhabvu. Kunyangwe ainakidzwa nokudya, aive akatsunga mukuzadzisa zviroto zvake. Iye muimbi wemimhanzi haatombobvumidza zvaanoita kuzvidzora pakubata kwake nesimba mumimhanzi.
VERENGA Rihanna Childhood Story Plus Untold Biography Facts
Travis Scott Mararamiro:
Panguva yekunyora Travis Scott's Biography, iye ane huwandu hunofungidzirwa hwemadhora makumi mana emamiriyoni. Kwakatangira hupfumi hwake kunonyanya kubva pakuedza kwake kwemimhanzi. Kuongororwa kwehupenyu hwaTravis Scott kunoratidza kuti anoshandisa zvese zvaainazvo kuti ararame hupenyu hwakanaka.
Nezve zvinhu zvaTravis Scott: Muna Gumiguru 2018, Travis Scott nemusikana wake webasa, Kylie Jenner vakabhadhara mari inosvika zviuru gumi nemana zvemadhora mazana matanhatu nemazana matatu emba paBeverly Hills, California. Scott zvakare ane mhando dzakasiyana dzemotokari dzemhando yepamusoro kusanganisira yake Maybach ine mukurumbira iyo inofungidzirwa kuti ingangoita zviuru mazana matanhatu emadhora.
Travis Scott Biography Chokwadi:
Muchikamu chekupedzisira chebhaisikopo raTravis Scott, hezvino zvimwe zvishoma zvinozivikanwa nezvake.
Travis Scott Fact # 1- Ake Matipi: Mumhanzi weveteran muimbi akahwina kwete pasi pemakumi matatu nepfumbamwe ma tattoos mumuviri wake. Mamwe emateti ake anosanganisira; Mhungu ine mahedhifoni, Mwedzi uzere pamusoro pebhu, miromo, Anchor uye Tiger. Zvakawanda zvakadaro, Shumba ine Wings, Butterfly, Tribal Design Lines uye Natural Landscape kutaura mashoma.
Ane anopfuura makumi matatu nematatu maatatoo anoratidza zvarinoreva.
Travis Scott Fact # 2- Chikonzero chezita rezita: Travis Scott ane zita kubva pakuberekwa ainzi Jacques Berman Webster II, akaburitsa pachena kuti babamunini vake ndivo vakafemerwa kuseri kwezita rake raizivikanwa renzvimbo - Travis Scott. Mune kumwe kubvunzurudzwa kwake akati:
“Sekuru vangu vanonzi Travis. Ainge akafanana nabamunini vangu vandaidisisa. Hama yangu yandaida. Ndakamutarisa uye sh * t, Iyo n **** yaingove inotonhorera se f * ck. Aigara achingoita swag. babamunini vangu vaitamba gorufu uye sh * t. Iyo n **** yaingove smart. Nguva dzose aiita sarudzo dzakanaka, sarudzo dzakanaka dzebhizinesi. ”
Travis Scott Fact # 3 Chitendero chake: Vabereki vaTravis Scott vakamurera mukutenda kwechiKristu. Nekudaro, iye mukurumbira akagara akachengeta zvitendero zvake zvechitendero zvakavanzika. Izvo hazvisati zvanyatsojeka nezvekuti achakurumidza kusarudza kutarisa pane chimwe chitendero senge Kucho, zvakadaro, inguva chete ichaudza kana akangoerekana aita sarudzo yakakosha.
Muchikamu chino chekupedzisira cheTravis Scott's Biography, iwe uchazoona yake Wiki ruzivo hwaro. Izvi zvinokubatsira iwe kuti uwane akati wandei echokwadi aTravis Scott nenzira yakapfupika uye yakapusa.
Zita rizere Jacques Berman Webster II
Zuva rekuzvarwa April 30, 1992
Vabereki zita Jacques Bishop Webster (Baba vake) naWanda Webster (mai vake)
Nicknamames La Flame, Cactus naJackTravi $
mudiwa Kylie Jenner (2017-2019)
Children Stormi Webster (mwanasikana wake)
basa Rapper, muimbi, munyori wenziyo uye mutori wezvekuburitsa
chitendero Chikristu (anochengeta izvo zvake zvemweya kwaari)
chitandadzo Kupindirana uye Nhabvu
CHOKWADI KUTI: Thanks for reading vedu Travis Scott Childhood Story plus untold biography zvinyorwa. At biography yemwana, isu tinoedza kururamisa uye kururamisa. Kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka muchinyorwa chino, ndokumbira utaure kana taura nesu!